Kobo Aura H2O Edition 2 ma ọ bụ nnukwu asọmpi nke Amazon Kindle | Akụkọ akụrụngwa
Kobo Aura H2O Edition 2 ma ọ bụ nnukwu asọmpi nke Kindle Amazon
Villamandos | | ndị na-agụ akwụkwọ, Nyocha
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Amazon anaghị enye ọnụọgụ ahịa akọwapụtara maka ngwaọrụ dị iche iche ọ nwere maka ọrịre n'ahịa, gụnyere nchịkọta nke eReaders, ọ dịghị onye ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-enwe obi abụọ na Kindle ha bụ ngwaọrụ kachasị ere ahịa nke ụdị a ụwa. Agbanyeghị, na nso nso a, Kobo na-aga n'ihu na-eme nnukwu mgbalị iji bụrụ nnukwu asọmpi. Fewbọchị ole na ole gara aga ha weere nzọụkwụ ọzọ na ya site na mwepụta nke ọhụrụ Kobo Aura H2O Edition 2, akpọkwara Kobo Aura H2O Edition 2017.
Akwụkwọ ọhụrụ e-akwụkwọ a bụ nyocha nke Kobo Aura H2O nke nwere nnukwu ọganiihu na ahịa ahụ wee malite ichegbu onwe ya na elu elu nke Amazon, n'ihi nnukwu ihuenyo ya, usoro nlezianya ya na ọnụahịa ya. Na mgbakwunye, ọ jisiri ike kwenye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-agụ akwụkwọ na mgbe ha nwalechara Kobo ngwaọrụ, ha gosipụtara atụmatụ ya niile nke ọma. Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, anyị anwalela Kobo Aura H2O Edition 2017 ọhụrụ na nke a bụ nyocha anyị zuru ezu.
3 Nyocha vidiyo
4 Ahụmịhe anyị na Kobo Aura H2O Edition 2 ọhụrụ
5 Ọnụahịa na nnweta
6 Nyocha ikpeazụ
Kobo etinyewo mmasị dị ukwuu mgbe niile ilekọta atụmatụ nke ngwaọrụ ya yana Kobo Aura H2O Edition 2 abụghị otu., ọ bụ ezie na anyị adọọla gị aka na ntị na ihe eji eme ihe nwere ike ịhapụ gị ntakịrị nleghara anya. A na-ewu akwụkwọ eletrọniki ọhụrụ a na plastic dị n'ihu, nke a ga-akara akara niile oge ọ bụla anyị gụrụ, ihe na-enweghị nkasi obi na mgbe ụfọdụ na-enye ngwaọrụ ahụ adịghị ọcha (dirty nwere ike ile anya nke ọma na ọtụtụ n'ime foto dị n’isiokwu ahụ, ị ​​ga - ahụ etu o si ejupụta mkpisi aka n’agbanyeghi na m kpochara ya ugboro ugboro). Azụ jupụtara n'ụdị roba nke ga-enyere anyị aka ijide ngwaọrụ ahụ na nkasi obi dị ukwuu ma na-enweghị ọtụtụ ohere ọ ga-agbada ma ọ bụ daa n'ala.
Otu akụkụ dị mma nke Kobo eReader ọhụrụ a bụ ya nnukwu 6.8-anụ ọhịa ihuenyo na-enye gị ohere ịnụ ụtọ eBooks fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị na-agụ akwụkwọ na omenala akwụkwọ usoro.
Ozo anyi enweghi ike ichefu ihe ohuru IPX68 asambodo nke ihe eji eme Kobo ohuru nwere ma nke a nyere anyi obughi nani ka anyi tinye akwukwo eletrọniki anyi, kamakwa ka anyi mikpuo ya ruo mita 2 n’okpuru mmiri na ihe kariri nkeji 60. Amachaghị m nke nwere ike ịchọrọ itinye akwụkwọ eletrọniki n'okpuru mmiri, ebe ọ ga-esiri ike ịgụ, mana ọ dị oke mma ịnwe ya mmiri ebe ọ bụ na anyị anaghị elezighi anya akwụkwọ na ọdọ mmiri ma ọ bụ na bat nke bat. ụlọ.
N'ikpeazụ, anyị chọrọ ikwu maka ịdị arọ nke Kobo Aura H2O Edition 2017 a, nke bụ 207 gram, na nke doro anya na o yiri ka ọ karịrị akarị maka ụdị ụdị a, ọ bụ ezie na ị na-eburu n'uche na ọ bụghị ihe eReader na etu esi emebu, anyị nwere ike iche na nke a ibu bụ erughị ala mgbe na-agụ.
Lee, anyị gosiri gị isi atụmatụ na nkọwa nke Kobo Aura H2O Edition 2 ọhụrụ;
Akụkụ: 129 x 172 x 8.8 mm
Arọ: gram 207
6.8-anụ ọhịa Letter touchscreen na 265 dpi e-ink ebipụta mma
Ihu ọkụ ihu: ComfortLigth PRO nke na-ebelata ikpughe na ìhè na-acha anụnụ anụnụ maka ịgụ akwụkwọ nke ọma karị n'abalị
Esịtidem nchekwa: 8GB ebe anyị nwere ike na-echekwa ihe karịrị 6.000 eBooks
Njikọta: Wi-Fi 802.11 b / g / n, Micro USB
Batrị: 1.500 mAh nke na-eme ka nnwere onwe ruo izu
Formatsdị akwadoro: 14 na-akwado usoro faịlụ (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR)
Asụsụ ndị dịnụ: Bekee, French, German, Spanish, Dutch, Italian, Portuguese Portuguese, Portuguese, Japanese na Turkish
Nhazi: TypeGenius - ụdị 11 dị iche iche na ụdị 50 +
Pụrụ iche font ọkpụrụkpụ na ịdị nkọ ntọala
Obi abụọ adịghị ya na ihe ndị kacha pụta ìhè nke ngwaọrụ Kobo ọhụrụ a bụ nnukwu ihuenyo 6,8-inch na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-agụ akwụkwọ dị ka nke ukwuu, na ọ dị mwute na ọtụtụ ụlọ ọrụ anwaala ịmalite eReader na ihuenyo Nke a Na mgbakwunye, asambodo IPX68 na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro dakọtara bụ ndị ọzọ nke nnukwu ike ya ndị tinyegoro ya dịka otu n'ime akwụkwọ elektrọnik kachasị baa uru na njirimara nke njirimara na nkọwa.
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị nyocha vidiyo zuru oke nke Kobo Aura H2O Edition 2017;
Ahụmịhe anyị na Kobo Aura H2O Edition 2 ọhụrụ
O doro anya Otu n'ime ihe kachasị masị anyị banyere Kobo Aura H2O Edition 2 bụ nha ihuenyo ya, nke na-enye anyị ohere ịnwe ngwaọrụ na aka anyị nwere nha nke yiri nke ọ bụla akwụkwọ n'ụdị akwụkwọ ọdịnala. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịgụ ihe n'ụzọ dị ntụsara karịa na-enweghị, dịka ọmụmaatụ, inwe mbido akwụkwọ ozi ahụ, ihe nke anyị bụ ndị anaghị ahụ nke ọma bụ ezigbo nsogbu.
Ga n'ihu na ihuenyo m ga-egosi na Nnukwu mkpebi na ọ na-enye, 256ppi nke ahụ na-emekwa ka mkpụrụedemede ọ bụla ederede dị nkọ ma doo anya. Na nke a anyị ga-agbakwunye atụmatụ ComfortLigth PRO nke na-ebelata ikpughe na ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, na nke a na-achịkwa na-akpaghị aka dabere na ìhè ebe anyị na-agụ. Akụkụ a bụ echiche iji gụọ tupu anyị lakpuo ụra ka anya anyị ghara ịkwụsị ike gwụrụ, dị ka ọ na-eme na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a.
Ihe ọzọ na-enweghị ụkọ na Kobo ngwaọrụ ọhụụ bụ nkwado maka ọtụtụ ụdị, ihe a na-enwekarị ekele. Kpọmkwem, anyị nwere ike bulite faịlụ ndị na-esonụ ndọtị; EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ na CBR.
Ọ dabara nke ọma, enwere m ọchioma ịnwale ọtụtụ akwụkwọ elektrọnik n'oge ndị a, mana otu n'ime nke hapụrụ m ezigbo ụtọ n'ọnụ m bụ Kobo Aura H2O Edition 2017, nke kachasị n'ihi nnukwu ihuenyo ya, kamakwa n'ihi ọtụtụ ihe, nke na-ahapụ atụmatụ nke ngwaọrụ ahụ n'azụ dị anya site na ibu ya, ikekwe dịtụ elu.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na anyị kpebiri na anyị agaghị anwa ịbanye na mmiri na mmiri, n'ihi ihe nwere ike ime, ọ bụ ezie na site na Kobo, ọ kwusiri ike ugboro ugboro na anyị ga-eme ya mmiri ma ọ bụ banye na ọdọ mmiri ahụ ebe ọ bụ na enweghị nsogbu. Na Actualidad Gagdget, anyị nwere mmasị na teknụzụ mana iji ya mee ihe ebe ọ bụ na anyị ji obi anyị niile kwenyesie ike na eReader dị oke ọnụ ala erughị eru ịnwale nke enweghị isi maka mmadụ niile.
Nke a Kobo Aura H20 Edition 2 adịworị ire ere n'ụwa nile mgbe e gosipụtara ya na ụbọchị ole na ole gara aga. Enwere ike ịzụta ya site n'ụzọ dị iche iche, gụnyere ụlọ ahịa anụ ahụ nke FNAC, fnac.es ma ọ bụ kobo.com. Na mgbakwunye, yana kedu ka ọ ga - esi bụrụ ụzọ ọzọ, enwere ike zụta yasite na Amazon na njikọ ndị a.
Banyere ọnụahịa ahụ, anyị anaghị eche akwụkwọ eletrikiiki ihu igwe, mana anyị na-eche ihu ọnụahịa ahụ belatara ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị gara aga, na-anọ na euro 179.99. Ọ bụghị ọnụ ala, mana ọ bụrụ na anyị atụlee ogo na ike nke ngwa Kobo a na-enye anyị, ọ karịrị ịgbanwe.
Iji mechie nyocha a, anyị enweghị ike ịkwụsị nyocha ikpeazụ. Nke mbu ka m chere nke a Kobo Aura H2O 2017 enweghị ike ịhapụ onye ọ bụla enweghị mmasị Echere m na ọtụtụ ndị na-agụ ya ga-enwe mmasị na ya, mana ndị ọzọ agaghị amasị ya, ọ bụghị n'ihi na o nwere ụkọ ma ọ bụ ntụpọ dị mkpa, mana n'ihi na enwere ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ na-achọghị ka nnukwu ngebichi a gụọ kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na m ga-ede ihe na ngwa Kobo ọhụrụ a, mgbe m jiri ya ọtụtụ ụbọchị, dị ezigbo nso, ọ bụ ezie na ọ nọ elu dị egwu. Ikekwe ibu dị ala na ihe dị iche iche maka owuwu ya ga-enyela ngwaọrụ a ọkwa ọ chọrọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na maka nsụgharị n'ọdịnihu ha mezie nsogbu nke akara metụtara akara niile n'okwu ahụ, ọ ga-enwe ekele dị ukwuu.
Amazon na-achịkwa ahịa eReader na Kindle ya, mana Kobo Aura H2O Edition 2017 dị nso n'ụzọ ọ bụla na ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri na ikekwe n'ọdịnihu ọdịnihu n'ime ụwa nke ọgụgụ dijitalụ gbanwere n'ụzọ dị egwu.
Nzube na ihe eji eme ihe
Kedu ihe ị chere maka Kobo Aura H2O Edition 2 a?. Gwa anyi na oghere edebere maka ikwu na post a ma obu site na netwọkụ ndi mmadu ebe anyi no na ebe anyi nwere mmasi ige uche gi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Kobo Aura H2O Edition 2 ma ọ bụ nnukwu asọmpi nke Kindle Amazon
Enwere m kobo a na ọnụahịa ọ na-efu achọtara m ntụpọ dị mkpa n'echiche m, nke ahụ bụ na akwụkwọ ọkọwa okwu asụsụ abụọ ọ na-etinye gụnyere ha niile n'asụsụ Bekee. Ọ gaghị ekwe omume na ngwaọrụ ịmata a French-Spanish akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ asụsụ Nchikota ebe English adịghị. Ọ bụrụ na erere ngwaọrụ ahụ n'ahịa mba ụwa, ọ kwesịrị itinye ngwaọrụ ndị emegharịrị na ahịa ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha na-ere ya naanị na mba ndị na-asụ Bekee.
Enwere ike ịnye 8 Galaxy Note na August 23 wee kụọ ahịa na mbido Septemba
Wiko weputara Jerry 2 na Sunny 2 ngwaọrụ iji mee ka oge ọkọchị chawapụta